वारविक फोटो ग्यालरी (सेप्टेम्बर २०१५–फेब्रुअरी २०१६) | JW.ORG
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इटालियन इन्डोनिसियन उङ्गाबेरे उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू एस्टोनियन किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्षोसा गालिसियन ग्रीक चिचेवा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी टगालोग टर्किश डच डेनिश तारास्कान ताहिटी थाई नर्वेली नेपाली पंजाबी पोर्चुगिज पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बाटाक (टोबा) भलेन्सियन मले मल्यालम युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिथुआनियन सर्बियन सर्बियन (रोमन) सिंहला सेबूआनो स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
वारविक फोटो ग्यालरी ५ (सेप्टेम्बर २०१५ देखि फेब्रुअरी २०१६ सम्म)
सेप्टेम्बर २०१५ देखि फेब्रुअरी २०१६ सम्म यहोवाका साक्षीहरूको नयाँ मुख्यालयको काममा के-कस्तो प्रगति भयो अनि स्वयंसेवकहरूले के-कस्ता काम गरे, यी फोटोहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ।
१. सवारीसाधन मर्मत भवन
२. घुम्न आउनेहरूको पार्किङ एरिया
३. मर्मतसम्भार भवन/बेथेलमा बस्नेहरूको पार्किङ एरिया
४. ‘ख’ आवास
५. ‘घ’ आवास
६. ‘ग’ आवास
७. ‘क’ आवास
८. कार्यालय/सेवा भवन
अक्टोबर ७, २०१५—वारविक निर्माणस्थल
पानी जम्ने ठाउँमा पुल राख्ने तयारी गरिंदै। पुल बनाउन चाहिने सामाग्री टायरहरूमाथि झारिएको थियो। यो पुलले सिमसार क्षेत्रलाई जोगाउँछ।
अक्टोबर १३, २०१५—कार्यालय/सेवा भवन
थरी-थरीका वनस्पति लगाइएको कौसी। यहाँ १६ थरीका वनस्पति लगाइएको छ। यी वनस्पतिहरूले जाडो सुरु हुनुभन्दा अघि आफ्नो रङ्‌ग परिवर्तन गर्छ। कौसीमा वनस्पति लगाइएको छ भने त्यसले वातावरणलाई स्वच्छ राख्न र उर्जामा लाग्ने खर्च कम गर्न मदत गर्छ। यी वनस्पतिहरूको हेरचाह गर्न झारपात मात्र उखेले पुग्छ।
अक्टोबर १३, २०१५—‘घ’ आवास
आवास भवनको किचेनको ऱ्याकहरू बनाउँदै गरेका भाइ। सिकर्मीको काम गर्ने विभागले २०१६ को फेब्रुअरीको अन्तसम्ममा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै किचेन ऱ्याक बनाइसकेको थियो।
अक्टोबर १६, २०१५—कार्यालय/सेवा भवन
वाचटावरको लोगोलाई उज्यालो पार्न बत्ती राख्दै गरेका भाइहरू।
अक्टोबर २१, २०१५—कार्यालय/सेवा भवन
कार्यालय/सेवा भवन, टावर र मुख्य प्रवेशद्वारमा राती झलमल्ल बत्ती बालिन्छ। भ्रमणमा आउनेहरूले यस टावरबाट वरपरको रमाइलो दृश्य हेर्न सक्छन्‌।
अक्टोबर २२, २०१५—वारविक निर्माणस्थल
आकस्मिक अवस्थाको लागि प्रयोग हुने मोटर-बाटो बनाउँदै गरेका स्वयंसेवकहरू। निर्माणकार्यलाई असर नगरोस् भनेर पछाडिका भागहरू बोराले छोपिएका छन्‌।
नोभेम्बर ९, २०१५—कार्यालय/सेवा भवन
लिफ्टको टुप्पोमा घाम छिर्ने छानो फिट गर्दै गरेका भाइहरू। कार्यालय/सेवा भवनको ११ वटा ठाउँमा घाम छिर्ने छाना राखिएका छन्‌।
नोभेम्बर १६, २०१५—मर्मतसम्भार भवन/बेथेलमा बस्नेहरूको पार्किङ एरिया
चिसो पानीको प्रबन्ध गर्न कार्बन स्टिल पाइप काट्‌दै गरेका भाइ।
नोभेम्बर ३०, २०१५—कार्यालय/सेवा भवन
झ्यालको आधार तयार पार्दै गरेकी बहिनी। यो काम सकेपछि अनि ड्राइवाल लगाइसकेपछि झ्यालको फिनिसिङ गरिन्छ।
डिसेम्बर १७, २०१५—वारविक निर्माणस्थल
पानी परेको दिनमा टाइल बिछ्याइँदै। मेसिनद्वारा जमिनलाई एउटै लेबलमा ल्याइँदै (दायाँतिर)। फोटोको अगाडिपट्टि, मेसिनको सहायताले टाइल बिछ्याइँदै। बायाँपट्टि, माटो यताउता नछरियोस् भनेर प्लास्टिकले छोपिएको छ।
डिसेम्बर २४, २०१५—वारविक निर्माणस्थल
वारविक बेथेलमा बिजुलीको प्रबन्ध गर्न सबस्टेसनमा तार लग्दै गरेका स्वयंसेवकहरू।
जनवरी ५, २०१६—कार्यालय/सेवा भवन
घुम्न आउनेहरूको पार्किङ एरियादेखि कार्यालय/सेवा भवनसम्म पुग्ने बाटोमा छाना बनाउँदै। यसले घुम्न आउनेहरूलाई पानी र हिउँबाट जोगाउनेछ।
जनवरी ५, २०१६—मर्मतसम्भार भवन/बेथेलमा बस्नेहरूको पार्किङ एरिया
एक जना भाइ पानी तताउने ठूलो मेसिनको सेटिङ मिलाउँदै। वारविकमा यस्तो चारवटा मेसिन राखिएका छन्‌।
फेब्रुअरी ८, २०१६—कार्यालय/सेवा भवन
‘लन्ड्री डिपार्टमेन्ट’-मा ड्रायर जडान गर्दै। यसले ६ देखि ४५ केजीसम्मको लुगा सुकाउन सक्छ। लुगा धुने मेसिनचाहिं दायाँपट्टि जडान गरिनेछ।
फेब्रुअरी ८, २०१६—टक्सिडो
परिचालक निकायका सदस्य गेरिट लोस बेथेलको प्रहरीधरहरा अध्ययन सञ्चालन गर्दै। वारविकमा काम गर्नेहरूले यो कार्यक्रम टिभीद्वारा हेर्न सक्छन्‌।
फेब्रुअरी १९, २०१६—‘क’ आवास
कार्यालय/सेवा भवनको लागि कार्पेट लग्दै। वारविकको लागि ६५,००० वर्ग मिटर कार्पेट अडर गरिएको थियो।
फेब्रुअरी २२, २०१६—वारविक निर्माणस्थल
सेप्टेम्बर २०१५ देखि फेब्रुअरी २०१६ भित्र ‘ग’ र ‘घ’ आवासमा बस्ने अनुमति प्राप्त भयो। अहिले यहाँ यो परियोजनामा काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी बस्छन्‌। सबै भवनमा लिफ्ट जडान गर्ने काम सकियो। आवास भवन अगाडिको बाटो बनाउने र टाइल बिछ्याउने काम सकियो। यस पालिको जाडो मौसम ठिक्कको भएकोले भवन बाहिरका कामहरू तालिकाभन्दा अगाडि नै सुरु गर्न सकियो।
फेब्रुअरी २४, २०१६—मर्मतसम्भार भवन/बेथेलमा बस्नेहरूको पार्किङ एरिया
फलामे खुट्टाको सहायताले सिलिङमा बिजुली फिट गर्दै। भित्ता/सिलिङको काम गर्ने विभागले भित्ता अनि सिलिङको फ्रेम तयार पार्ने, इन्सुलेट गर्ने, ड्राइवाल फिट गर्ने, प्लास्टर गर्ने अनि भित्ताहरूमा अग्निरोधक सामग्री राख्ने काम गर्छ।
वारविक फोटो ग्यालरी ४ (मेदेखि अगस्त २०१५ सम्म)